စက္ကူလို ခေါက်လိပ်နိုင်တဲ့ သိန်း ၁ ထောင်ကျော်တန် LG Signature OLED R Rollable TV ကို ရောင်းပြီ – MyTech Myanmar
စက္ကူလို ခေါက်လိပ်နိုင်တဲ့ သိန်း ၁ ထောင်ကျော်တန် LG Signature OLED R Rollable TV ကို ရောင်းပြီ
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ပြသခဲ့တဲ့ LG ရဲ့ စက္ကူလို ခေါက်လိပ်နိုင်တဲ့ OLED TV ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ရောင်းဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ နည်းပညာ မြင့်သလို ဈေးကလည်း မသေးပါဘူး။ ဒေါ်လာ ၈၇,၀၀၀ လောက်ရှိပြီး မြန်မာငွေ သိန်း ၁ ထောင်ကျော်ပါတယ်။ အခုတော့ သိန်းထောင်ကျော်တန် TV ကို တောင်ကိုရီးယားက နာမည်ကြီး စတိုးတွေမှာ ရောင်းပေးလိုက်ပါပြီ။
LG Signature OLED R ရဲ့ ထူးခြားချက်က ၆၅ လက်မ OLED မျက်နှာပြင်ကို ခေါက်လိပ်ပြီး အောက်ခြေက အလူမီနီယမ် အထိုင်ထဲ ထည့်သွင်းထားနိုင်တာပါ။ Zero View ဆိုရင် အဲဒီလို လုံးဝ မမြင်ရအောင် ဖျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ Full View ဆိုရင် ၆၅ လက်မ အပြည့် ပြသမှာ ဖြစ်ပြီး Line View ဆိုရင် မျက်နှာပြင်ရဲ့ အထက်ပိုင်းကိုပဲ မြင်ရမှာပါ။
အသံစွမ်းရည်ကလည်း အရမ်းမိုက်ပြီး 100W Output Power ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ 4.2 Channel Speakers တွေ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ LG Signature OLED R TV ကို Gyeongbuk ရှိ LG ရဲ့ Gumi TV စက်ရုံကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး TV ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တချို့ကို လက်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ဒိန်းမတ် ချည်ထည် ကုမ္ပဏီ Kvadrat က Speakers ကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ချည်သားတွေကို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး Signature Black, Moon Gray, Topaz Blue နဲ့ Toffee Brown အရောင်တွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ခြေ အထိုင်ကို အလူမီနီယမ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး သင့် နာမည် ရေးထွင်းခိုင်းလို့လည်း ရပါတယ်။
TV ဝယ်ယူသူတွေအတွက် ၃ နှစ်ကြာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲမှာ TV ရဲ့ Maintenance အတွက် ၁ နှစ်ကို Technician တွေ ၂ ကြိမ် စေလွှတ်ပေးတာ ပါပါတယ်။ LG က နေအိမ်မှာ TV တပ်ဆင်နေရာချဖို့အတွက်ပါ လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။
MyTech Myanmar2020-10-21T11:47:25+06:30October 21st, 2020|LG, News, TV|
မကြာခင်မိတ်ဆက်တော့မယ့် စမတ်ဖုန်းသစ်တွေအတွက် Teaser တွေထုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Lenovo
Redmi အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ပထမဆုံး စမတ်နာရီကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ စတင်မိတ်ဆက်
iPad နဲ့ MacBook တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုအချို့ကို တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပဆီ ရွှေ့နေပြီဖြစ်တဲ့ Foxconn
ဒီနှစ်မကုန်ခင် စမတ်ဖုန်းတွေမှာ မြင်တွေ့လာရမယ့် Samsung NEON
RAM 8GB + ROM 128GB ပါဝင်သည့် realme 7i စမတ်ဖုန်းသစ်ကို ဈေးနှုန်း ၃ဝ၉,၉ဝဝ ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မည်
Apple iPhone 12 Pro, HUAWEI P40 Pro နဲ့ Google Pixel 4, ဒီဖုန်း ၃လုံးမှာ ဘယ်ဖုန်းက အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်မလဲ ?
vivo V20 နဲ့ OPPO Reno4 Pro, ဘယ်ဖုန်းက ကင်မရာ ပိုကောင်းလဲ ?
MYTECH မှာ အမေးများသော မေးခွန်းများ (အပိုင်း-၇၅)
PUBG MOBILE မှ PUBG MOBILE GLOBAL CHAMPIONSHIP ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းတန် အွန်လိုင်းဂိမ်းအစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်
ပြည်တွင်း စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကိုင်နေသူများနှင့် စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် “Leadership, Culture & Connectivity” ဆွေးနွေးပွဲကို Huawei က ဦးစီးကျင်းပ